Pro Yaxye Sheikh Caamir Oo Si Cajiiba Farta Ugu Fiqay Dhaqalo Xumida Ka Jirta Muqdisho | WANAAGSIDE.COM
Home / ECONOMY / Pro Yaxye Sheikh Caamir Oo Si Cajiiba Farta Ugu Fiqay Dhaqalo Xumida Ka Jirta Muqdisho
Posted by: Ahmed Xaaji Halane in ECONOMY, NEWS TODAY 28 days ago	0 58 Views
Muqdisho Wanaagside.com pro Yaxye Camir oo ah aqon yahan ku taqasusay Cilmiga Dhaqalaha iyo Siyasada calamiga ayaa hab cajiba u sharaxay dhaqalo xumida hesata magalada shacabka muqdisho oo isugu jiraan ganacsatada, shaqalaha rayidka iyo cidamada Dowlada.
Dhanka kale aqon yaxye camir oo aad wax ugu qora darenka bulshada iyo qodobada siyasaded ee xasisaga ee tagan ayaa ku soo aadaya xili xukumada nabad iyo nolol eey lamaha warbahinta kashageyan in dhaqalaha dalka uu aadulaba lamay.
Cinwanka Qormada Ganacsigu Biya cabaal male.
Maanta waxaan la joogay 4 Ka mid ah Ardaydeeydii oo markii ey Jaamacadda dhameeysteen, Abuurtay Ganacsi, Dukaanna Ka furtay 4 irdoodka Xamar weyne.
Waxa ey igu yiraahdeen: Maanta oo kale 15 kii Ramadan Sannadkii hore Dukaankeenu buuq ayuu ahaa Dad badan ayaa wax Naga gadanay, kii Ka sii horeyayna 1da Ramadaan ayuu buuq ahaa. Maanta waxaa noo soo galay 2 Ruux oo kaliya, Dukaamo badan ayaana la iska xiray, markii ey kiradii iska bixin waayeen.
Waxaa na Soo hormaray Nin Tima jara ah oo Asgari Ka daba qeylinayo, iyo Asgarigii oo Qori Ku taagayo, waxa uu leeyahay Tima jarahu, timaha ayaan u jaray Lacagtiina waa ii diiday.
Waxaan u sheegay in xalay mooto Bajaaj aan saarnaa,Deg. Cabdicasiis Kala wareeg la yiri, waxaan u tagay Taliyihii, waxa uu igu yiri, Asgarigaa Lacag u tuur, waan Ka diiday, mootadii iska noqo ayaan Ku iri, waan Soo Lugeeyay 100 talaabo kadib dhinaca kale ayaan Bajaaj kale 1$ uga Soo raacay.
Waxaan arkayay intii aan dukaanka joogay in ey Soo bateen dadka tuugsanayo, weliba u badan Dadkii Reer magaalkii ahaan jiray Shaqaale Dowlo & Hayado kale.
Waxaan kula taking lahaa in Golaha wasiiradu ey Ka shiraan Saameynta Dhaqaaluhu Ku yeelan Karo Nabadgalyada.
Previous: Lanta Amaanka Villa Somaliya Oo Caqabad Weyn Ku Heya Gudiga Dorashoyinka Somaliya
Next: Daawo Sawirada Deni Iyo Xaaf Oo Galkacyo Ku Yeshay Kulan Is Wareysi Ah